ASCII Gingilcha Dirqalaa
Dirqala kam akka ta'e ibsuu dandeessa, kanneen akka bocquu bu'uuraa, afaan, qindaa'ina arfii, yookan qurxiinsa galmee barruu waliin alergamu yookan alaagamu. Qaaqni kan mul'atu yoo faayilii ASCII gingilcha waliin "Barruu Erguu" fe'amu yookan galmee yeroo duraatiif yommuu olkeessu yookan yommu "akka olkaa'i" maqaa birootiin olkeessu.
Qindaa'ina alergi yookan alaaguu faayilii keetii hiika. Yommuu alergitu, arfii qofatu qindaa'ee qurxiinsi keeyyataa qindaa'uu danda'a.
Qindaa'ina amala faayilii alergi yookan alaaguu ibsa.
Bocquu durtii qindeessuun, kan ati ifteessitu barruun mul'chuu kan qabu bocquu murtaa'e irratti qofa. Bocquun durtii filatamuu kan danda'uu yommuu alaaguu qofa.
Afaan barruu ibsuun, yoo kun duraan dursee ibsamuu baate. Qindaa'inni kun kan jiraatu yommuu alaaguu qofa.
Akaakuu keeyyata qurxiinsa sarara barruuf qindeessa.
Akka qurxii keeyyataatti "Carriage Return" fi "Linefeed" oomisha. Dirqalli kun durtii dha.
Akka qurxii keeyyataatti "Carriage Return" oomisha.
Akka qurxii keeyyataatti "Linefeed" oomisha.
Title is: ASCII Gingilcha Dirqalaa